Oghere Zirconia eze, oghere Zirconia, Diski Zirconia - Yurucheng
Dị na Shenzhen mpaghara akụ na ụba pụrụ iche, Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -emepe emepe, n'ichepụta na ire ahịa Dental Zirconia Ceramic Block.
Super Translucency 57% Mkpuchi 3D Plus Mult ...
Yucera eze ST zirconia ngọngọ maka cad / cam ...
HT zirconia ngọngọ onye na -eme eze ihe cos ...
Ihe mgbochi Zirconia site na otu zirconia ntụ ntụ fr ...
3D Pro Multilayer Zirconia na -egbochi Cerec 57% Tra ...
Kpọtụrụ anyị maka ozi ngwaahịa ndị ọzọ
Ekwenyesiri m ike na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị zuru oke maka mmemme gị n'ahịa gị.
Yucera guzobere nkwado na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ nhazi ezé na ụlọ ọgwụ ọnụ, nweta arụmọrụ pụrụ iche n'ọhịa ma nweta ndị ọkachamara na ndị ọrịa aha ọma.
YUCERA nwere otu ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara siri ike, 60% nke ndị otu ya bụ ndị ọkachamara ọkachamara n'ihe banyere ndụ na ndị ọkachamara CNC nwere ọgụgụ isi.
Dị ka onye na -eweta ihe ọnụ nke ọkachamara, anyị nwere ike ịnye akụrụngwa eze dijitalụ, akụrụngwa ezé na ngwaahịa na ọrụ dijitalụ zuru oke.
Njem ọhụụ nke njikọta ụlọ ọrụ, shakin ...